India : Mahalala Sy Manompo An’i Shiva Ny Tanora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2014 10:43 GMT
Lehilahy iray manao akanjo tahaka an'i Shiva, Andriamanitra Tompo Hindo, miseho nandritra ny Fankalazana ny Maha Shivratri tany New Delhi. Sary avy amin'i Rohit Gautam. Copyright Demotix (10/3/2013)
Shiva ve no andriamanitra tsara ho an'ny tanora ankehitriny ? Miseho amin'ny fahitalavitra, any anaty boky, amin'ny sarimihetsika, eny fa hatramin'ny tombokavatsa aza ilay andriamanitra Hindo mandritra ireo andro ireo.
Nobitsihan'i Ravindra Jadeja, kintan'ny cricket Indiana izay manana mpanara-dia maherin'ny 112.000 ao amin'ny Twitter tamin'ny fiandohan'ny taona izao bitsika izao :
Shiva no tsotra indrindra amin'ny Andriamanitra rehetra. Mifoka bozaka izy, mandihy ary tsy miraharaha ny akanjo anaovany. Izany no Andriamanitra tsotra amin'izao fotoana izao.
Hatramin'ny gazetiboky lehibe aza dia rakotry ny tantaran'i Shiva sy ny faneken'ny tanora indiana azy vao haingana . Rakotr'ity zava-niseho ity tamin'ny Aprily 2013 ny India Today ( India androany), gazety boky mpiseho isan-kerinandro. Izao no nosoratan'i Aroon Purie, tonian-dahatsoratry ny gazety boky ao amin'ny matoan-dahatsoratra :
Andriamanitra atahorana i Shiva ho an'ireo taranaka Indiana nandritry ny arivo taona. Manompo azy ny olona satria izy irery amin'ireo telo izay iray masina ho an'ny Hindoisma no manana hery handrava. Tahaka ny any amin'ny sehatra maro samihafa, dia averin'i India tanora, tanan-dehibe indray ny fahendrena iraisana. Ho an-dry zareo dia tsotra i Shiva, sary vongana fahiny lasa manaraka ny toetrandro, mifanaraka tsara amin'ny fanjifàn'ny taonjato faha 21.
Tahàka ny miha-mahazo vahana ny tranga “Shiva” hatramin'ny fandinihana nataon'i Purie. Heniky ny tantara maro samihafan'i Shiv Puran ny fandaharana Devon ke Dev Mahadev amin'ny fahitalavitra izay mbola mamim-bahoaka roa taona sy tapany aty aoriana. Nofidian'ny Bollywood, tantanan'i Karan Johar hatao sarimihetsika ny boky tantara mitohy telo nosoratan'i Amish Tripathi. Nanaraka azy ilay Amerikana mpanatontosa sarimihetsika te-hahazo ny zo amin'ny fanaovana ilay sarimihetsika ho amin'ny teny Anglisy.
Ataon'i Tripathi ankamantatra ny zava-miafina ao ambadiky ny lazan'i Shiva. Izao no nolazainy nandritra ny resadresaka natao tamin'ny gazety Wall Street :
Tsy gaga amin'ny fankafizan'ny tanora ny anganontsika aho. Efa toy ny any anaty ràn'ny Indiana mihitsy ny resaka anganongano. Tsy inoako hoe hanjavona mora foana izany.
Manana fijery ifotony kokoa momba ny lazan'i Shiva i Devdutt Pattanaik, mpanoratra boky maro momba azy io no sady manampahaizana manokana miasa ho an'ny Devon ke Dev Mahadev. Heverin'i Pattanaik fa miara-dàlana amin'ny fahatsapana ny fanambonian-tenan'ny lehilahy ny lazan'i Shiva. Raha jerena amin'ireo kasinga marobe izay mitondra amin'io hevitr'i Shiva io hoe ambony ny lehilahy, dia tantarainy fa mety ho vokatr'ireo tantara an-tsarin'ny mpanonta boky Amerikana DC Comics sy Marvel ity farany :
Endrika vaovaon'ny fankahalàna sy fanilihana izay rehetra mamofompofona vehivavy ny votoatin'io, na dia efa manomboka mifamihina aza ny vehivavy sy ny lehilahy ao amin'ilay sarimihetsika Gulaab Gang. Mankasitraka ny herisetra ataon'ny “alpha” mpihaza izay mipetraka ery an-tampon'ny rindran-damina ary mifehy ny tontolo izany. Tsy mahagaga raha toa ka mahatsiaro ho tsy voaaro hatrany ny vehivavy any amin'ny tanàna Indiana.
Hafa ny fijerin'i Sadhguru, yogi Indiana sady mpamorona ny Isha Yoga. Heverina ho toy ny yogi voalohany izay mampiditra ny nofo ho amin'ny fanahy i Shiva , izao no soratany ao amin'ny Facebook :
Fiainam-panahy ny fandikàna ny lalàn'ny nofo. Amin'izay heviny izay dia mpandika lalàna izahay, ary Shiva no fara-tampony amin'ny mpandika lalàna. Azonao atao ny tsy manompo an'i Shiva nefa miaraka amin'ny taritary.
Aghori iray hiringiriny, mpanaradia an'i Shiva mifoka cannabis. Sary avy amin'i Alewis2388 tao amin'ny Wikimedia Commons. CC BY
Ity sarinà “mpandika lalàna” ity no toa iray amin'ireo kasinga milaza zavatra amin'ireo tanora Indiana. Ahitana ny tombokavatsan'i Shiva ny vatan'ireo mpilalao sarimihetsik'i Bollywood, Ajay Devgan sy Sanjay Dutt, izay fantatra amin'ny andraikitra raisiny any anatinà sarimihetsika mahery setra.
Saingy mazava tsara fa tsy ireo ihany no antony mahasarika ny tanora ho amin'ity endrika hafahafa ity. Ampahafantarin'ny mpitoraka bilaogy iray ao amin'ny tranonkala Indiana “Boloji” araka ny fomba fijeriny ny antony maha-tsotra an'i Shiva :
Ny zavatra mahafinaritra ahy amin'i Shiva dia ny fisehoany amin'ny endrika maro samihafa. Lehilahy iray manam-bady izay mety ho tokan-tena hiringiriny ihany koa, mpandihy tapa-kofehy afaka mitorevaka manao fandinihan-tena lalina; tsy misy fetra ny hirifiriny rehefa nodimandry i Sati, tapahany tsy nisy indra-fo ny lohan'i ganesha. Alainy ny endriky rehetran'ny natioran'ny olombelona. Raha toa ianao ka afaka mifanaraka amin'io olona manana endrika maro manova fisainana io, dia vitanao ny mifanaraka tsara amin'ny fisianao sy izay rehetra fonosiny.
Tsy azo ialàna ny fahalinana amin'i Shiva na dia eo aza ny fanamboniany ny lehilahy, ny maha-barabara azy na ny fakàny ny natiora rehetra. Asehon'ny Google Trends fa miha-tian'ny olona miandalana izy ity tato anatin'ny dimy taona farany, raha nisy fihemorana kely teo anelanelan'ny 2006 sy 2009. Na inona na inona antony dia tahàka ny ho hita foana n'aiza n'aiza ary amin'ny fotoana rehetra ato ho ato ireo boky, sarimihetsika, fandaharan'ny fahitalavitra ary ireo tombokavatsa.